About Us – Linn Myanmar Construction
2005 ~ 2010: While attending Hmawbi Technological University, he studied practical engineering at Construction Engineer U Kan Thein Si. From 2010 to 2012, he served as the 3rd Junior Engineer in charge of Hlaing Bwe in Bridge Task Force (5). In 2013, it was renamed Lin Myanmar and hiredaspecial labor contractor.
As an industry, construction accounts for6to9percent of GDP
ကျွမ်းကျင် လက်မှုပညာရှင်များ၊သီးခြားပညာရပ်တစ်ခုကို အထူးပြုသော လူငယ် အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များ၊ အခြေခံလိုအပ်သော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများ ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ နွေးထွေးသော၊ လုံခြုံမှုရှီသော အာမခံချက်ပေးနိုင်သော အဆောက်အဦး များကိုတည်ဆောက်ပေးနေပါသည်။
အနာဂတ်တွင် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို အခြေခံသောအင်ဂျင်နီယာ ကန်ထရိုက်တာများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဖြစ်လာစေရန်။ အနာဂတ်တွင် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို အခြေခံသောအင်ဂျင်နီယာ ကန်ထရိုက်တာများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်လာစေရန်။
Copyright © 2022	Linn Myanmar Construction All Right Reserved